"Kornayladu may fahmin dimuquraadiyada oo xukunkii Afweyne ayuu garaad kooda siyaasadeed weli la haystaa." Cali Kubad —
Home » “Kornayladu may fahmin dimuquraadiyada oo xukunkii Afweyne ayuu garaad kooda siyaasadeed weli la haystaa.” Cali Kubad
By radiosomit.com September 17, 2021 No Comments3 Mins Read
Maqaal uu qoray Cali Kubad, ayaa waxa uu ku yidhi “Adduunyadan reer galbeedka ee aynu jilno dimuquraadiyadu ay samaysteen, waxa ka xaaran ah in dawlada hoose ee la soo doortay aanay faraha la geli karin xukuumada dhexe, waayo dawladaha hoose waa dimuquraadiyadii oo hoos loogu soo dejiyey heer hoose( Local government). Qof ay dadweynuhu soo doorteen, qof kale oo la soo doortay ama qof la soo doortay soo magacaabay wax uma yeedhin karo, oo dee suuragalba maaha taasi. Tusaale, markii uu xanuunka COVID-ku yimi, ayaa waxa dadweyne faro badan oo guryaha loo yaqaano guri baadiyaha( cottages) ku leh meelo ka baxsan magaalada Oslo( Norway), ayey is yidhaahdeen u baxsada, oo magaaladan weyn ee uu ku habsadey xanuunkani ka fogaada.
Waxa dhacday inay Maayaradii magaalooyin kaas yar yar maamulayey, inay yidhaahdeen ma imi kartaan magaalooyin kayaga, waayo dee xanuunkii baad u keenaysaan dadkii magaalooyinka yar yar deganaa, sidaas darteed amarkii maayarada tuulooyinka yar yar baa hirgalay. Caasimada oo uu degan yahay boqorka Norway iyo xukuumadii dhexe oo Raysal wasaarihii iyo wasiiradiisuba joogaan waxa amrayey waqti la xidhayo ama la furayo dhaqdhaqaaqa dadka Maayirka Hargeysa dhigiisa ee Oslo, Norway. Bal Muuse Biixi ma yeeli lahaa amarka Maayar C/kariim? Jawaabtu waa maya.